बिआरआईबाट चीन–नेपाल लाभान्वित हुनुपर्छः उपराष्ट्रपति पुन – Everest Dainik – News from Nepal
बिआरआईबाट चीन–नेपाल लाभान्वित हुनुपर्छः उपराष्ट्रपति पुन
२०७६, ९ श्रावण बिहीबार
काठमाडौं, साउन ९ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले अगाडि सारेको अवधारणा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) मा सहभागी हुन पाउनु नेपालको लागि गौरवको विषय भएको बताएका छन् ।
चीनको यूनान प्रान्तका उपगभर्नर चाङ कुवहुयले आज ग्रीनहाउसमा गरेको शिष्टाचार भेटमा उनले भने, “बीआरआईमा नेपाल जोडिएको छ, यसले दुवै देशलाई उचित लाभ दिनुपर्छ ।”
उपराष्ट्रपतिले वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै चिनियाँ लगानीका लागि आग्रह गरे । “हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नाराका साथ आर्थिक विकासतिर अगाडि बढेका छौँ”, उनले भने, “नेपालको विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिकका साथै वैदेशिक लगानीको खाँचो छ ।
यसमा चिनियाँ लगानीकर्ताले अधिकतम लगानी गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।” उनले कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जडीबुटीको प्रशोधन, खनिज पदार्थको उत्खनन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकासका प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै यी क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।
भेटमा उपगभर्नर चाङ कुवहुयले नेपालसँग विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्न पाउँदा चीन र यूनान प्रान्त खुशी रहेको बताए । उनले राष्ट्रपति सिले यूनान प्रान्तलाई दक्षिण एशिया र पूर्वी एशियाका राष्ट्रहरुसँग चीनको सम्बन्धको गन्तव्य बनाउनुपर्ने धारणा लिएको उल्लेख गर्दै सोहीबमोजिम काम भइरहेको बताए ।
उनले यूनान प्रान्तले नेपालमा जलविद्युत् निर्माणका लागि लगानी गरिरहेको र थप लगानी गर्न लागेको बताएको उपराष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक मनोज घर्तीमगरले जानकारी दिए ।
ट्याग्स: उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ
कोरोना लागेर निको भएका भन्छन्ः ‘सकभर हुन नदिऊ, भए आत्मबल बढाऊँ’
ताज उतारेर कोराना संक्रमितको उपचारमा फर्किन मिस इङ्ल्याण्ड २०१९
भारतमा प्रतिदिन ५ सय बढी संक्रमित थपिँदै, ३०% मा लक्षणविहिन संक्रमण, दोस्रो इटाली बन्ने खतरा
कालिञ्चोकमा आइसोलेसन वार्ड निर्माण
कालीमाटी बजार आजदेखि बन्द, कहाँबाट किन्ने तरकारी ?
अमेरिकामा रोकिएन कोरोनाः एकैदिन १९ सय ४० को मृत्यु, संक्रमित कति ? (सूचीसहित)
‘नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएकामा सङ्क्रमणको जोखिम देखिएन’